Indostrian'ny simika - Hengshui Jrain Frp Co., Ltd.
Ny zavatra simika mandroso ankehitriny dia miteraka fanamby maro ho an'ny fitaovana fananganana fitaovana fanodinana. Ny fanamby ara-materialy amin'ireto serivisy mampidi-doza sy mampidi-doza ireto dia mitarika ireo injeniera lavitra ny fitaovana nentim-paharazana toy ny vy karbonina sy ny vy vy. Alloys mety ho safidy, fa safidy tena lafo.
Raha oharina amin'ireo fitaovana ireo, plastika fanamafisana fiberglass (FRP) dia safidy azo antoka sy mahasoa ny teti-bola. Raha jerena ny fahombiazan'ny fanatanterahana ny fampiatoana ny FRP sy ny tombony lehibe amin'ny vidiny maro, ny FRP dia fitaovana mahaliana amin'ny fananganana tontolo iainana ankehitriny.
Ny fitaovana fiberglass dia mitazona ny entana feno mavitrika sy hidrostika ho an'ny tontolo simika, rindrina milamina ary malefaka izay mahatonga azy ireo hifanentana amin'ny fikarakarana, fitehirizana ary fanodinana ireo ranon-tsolika na fanimbazimbana miendrika zava-mahadomelina.
Ny Jrain dia manome vahaolana amin'ny fitahirizana sy fikarakarana ny ranon-javatra simika, toy ny:
- asidra hidrôkôroôma, asidra Sulfuric; - asidra matavy - Sodoma sy Kalsioma Hydroxide - Sodium Chloride, Aluminium klorida, Ferric klôro, Sodoma sulfat
Ny sosona simika 2 ka hatramin'ny 5 mm matevina dia mahatonga ny fiara mifono vy tsy mety simika, misy na tsy misy rindrina roa sosona.
Ankoatr'izay, ny Jrain dia manolotra vahaolana ho an'ny karazan-javamanitra simika maina, toy ny sodium klorida sy ny sodium bicarbonate (BICAR), sns.
Ity indostria ity dia manao dingana sarotra izay mifototra amin'ny fitsaboana ny ranon-javatra simika sy solika. Fantatry ny Jrain ny fahasarotana sy ny fangatahana manokana amin'ity tsena ity ary ankoatry ny fiara fitehirizana sy ny silos dia manome fitaovana famolavolana ihany koa, toy ny fikosoham-bary.
Fitaovana friberglass izay azon'ny Jrain alaina ho an'ny indostrian'ny simika dia tsy voafetra ho an'ny fiara fitahirizam-bidy, mpandrafitra, sodina, ducts, firakotra, fitaovana roa laminate, reakira, mpisintaka, lohateny, sns.
Afa-tsy ny vokatra fiberglass, ny Jrain dia manome serivisy fikojakojana toy ny fanavaozana, ny fikojakojana ny fisorohana, ny fanatsarana ny fotodrafitrasa, ny fanamboarana, sns. Tongava soa eto aminay mba hisian'ny vahaolana fanoherana ny simika.
Famolavola grating, hamolavola, Nohavaozina Fiberglass, Fitaovana fanodinam-bokatra Fiberglass, Mamatotra fanamafisana FRP, Masinina fanamafisana GRP,